Kutungamirirwa kwechitoro chekuIndaneti- Swiss-apteka.com kunosimbisa zvakavanzika zvakazara zvemashoko akawanikwa kubva kuvashandisi vakanyora. Izvo zvose zvigadziro zvehutano hwekuchengetedza uye kushanda nevatengi zvinobva pamitemo yepamutemo iripo uye mabasa eRussia Federation.
Zvose ruzivo rwaunotsanangura paunyoreji dzichachengetwa mune d database yakachengeteka. Nzvimbo yepaIndaneti cheSwitzerland-apteka.com inoponesa zvakavanzika zvakavanzika paunenge uchiita urongwa, uyewo kuti ruzivo pamusoro pemutengi ruchashandiswa chete mukushandiswa kwechirongwa chawakagamuchira.
Dhidhiro yako yekunyora inoda chete kuti vatungamiri vedu vave vakakwanisa kukunyorerai nefoni, uye kushandiswa kwebasa kwakakwanisa kuendesa zvinhu zvakarayirwa kunzvimbo yakakodzera panguva.
Mukuwedzera, nekunyora, unogona kugamuchira ruzivo pamusoro pezvinhu zvose zvedu redu: zvinhu zvitsva zvinowanikwa, kutengesa, mapurogiramu chaiwo.
Kana iwe uine matambudziko kana mibvunzo pamusoro pemvumo-kunyoresa mudura-nyora kwatiri e-mail info@swiss-apteka.com uye isu ticharamba tichikubatsira!
Vamiririri vepaIndaneti store Swiss-apteka.com havazombokukumbirai mapepa epurasitiki kana mamwe mashoko akavanzika.
1. Zvimwe zvinhu zvakagadzirwa panzvimbo yepaiti ndiyo inyanzvi yezvinhu zvepaIndaneti store Swiss-apteka.com. Kushandisa zvinhu zvakadai pasina kubvumirwa kwevanini vepanzvimbo kunorambidzwa.
2. Iwe webhusaiti yepaIndaneti store Swiss-apteka.com ine zvibvumirano zvinokubvumira kuenda kune dzimwe nzvimbo. Isu hatisi ivo vane ruzivo rwemashoko akabudiswa kune idzi masayiti, uye isu tinopa hukama kune avo chete kuitira kuti tipe nyore kune vashanyi panzvimbo yako.
Mashoko evanhu pachavo uye kuchengeteka:
1. Nzvimbo yepaIndaneti cheSwitzerland-apteka.com inopupurira kuti hapana ruzivo rwaunowana kubva kwauri ruchazombopiwa kune chetatu, kunze kwezvakataurwa nemutemo wezvino weRussian Federation.
2. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, shandisi yepaIndaneti- Swiss-apteka.com inokukumbira kuti urenge uye upe ruzivo rwemunhu. Mashoko aya anowanikwa anoshandiswa chete kana achishandura urongwa muchitoro chekutsvaga kana kuti kupa muenzi mukana wekuwana ruzivo rwakakosha.
3. Mashoko evanhu ega ega anogona kuchinjwa, kuvandudzwa kana kubviswa chero nguva mu "Personal Cabinet" chikamu.
4. Kuti ndikupei ruzivo rwemwe rudzi, shanduro yekuIndaneti Swiss-apteka.com, nemvumo yako yakajeka, inogona kutumira mameseji emashoko kune kero ye-e-mail inotsanangurwa pakunyoresa. Panguva ipi zvayo iwe unogona kuzvisunungura kubva pane tsamba yekunyora.
5. Mashoko aya pawebsite ino ndeyekunyatsodzidzisa, uye chero kuchinja kunogona kuitwa pasina chero chinozivikanwa.
Kune mibvunzo yose ine chokuita nekutevedza nekuchengetedzwa kwezvakachengetedzwa, zvinyorwa zvekodzero uye mune zvimwe zviitiko - tapota taura newebsite administration pa info@swiss-apteka.com